Diaphragm amaphampu zenzelwe ukumpompa kokubili uketshezi okumsulwa nokuba viscosity ongaphakeme nezisombululo olwalwenza kokuba ukungaguquguquki okusezingeni eliphezulu. Amadivayisi labo abazokwazi ezihambayo izinhlayiya emikhulu ngaphandle kokulimaza imishini. amadivaysi womoya ngokusebenzisa abafanele injini design singasetshenziswa ngisho endaweni empikiswaneni evuthayo.
A futha diaphragm uyakwazi bahlinza amavolumu ezahlukene ketshezi. It lingadonswa omunye izinkulungwane amalitha ngomzuzu uketshezi ngayinye. Ingcindezi zingalawulwa-8 emugqeni. Kukhona amamodeli ukuthi unekhono samozakachki.
Bavumela wena ukukhulisa emanzini ukuze ukuphakama 8 amamitha kanye iphele ngaphandle ingozi yokonakalisa. Lapho ukuvala futha esidayisa diaphragm eyeka ukusebenza kwawo futhi futhi waqala lapho uwuvula. Lo mklamo futhi Umgomo we operation uvumele ukwenza ngaphandle kokuba ukufaka dlula noma impumuzo valve.
Pumps zakhiwe ezahlukene izinto constructional. Ngakho, amadivaysi metal zenziwa kusukela yensimbi, aluminium, insimbi engagqwali futhi hastelloy ingxubevange. amadivaysi Metallic eyenziwe polypropylene futhi acetal. Wonke amadivayisi esetshenziswa diaphragm lukathayela, esiza ukunweba ukusebenza ukunciphisa yesondlo gqwa nokugcinwa izindleko.
Isidingo enkulu iqinile Aro diaphragm futha. Ububanzi imikhiqizo yalesi nomkhiqizi zahlukahlukene kakhulu. Ukuze ukusetshenziswa jikelele ezimbonini kukhona kudivayisi efanelekayo compact kokuba Usayizi 1/4 kuya 3/4 intshi. Lezi amadivayisi ukusebenza eliphezulu kanye nosayizi esincane. Okunjalo futha diaphragm lingadonswa ngomzuzu 56 amalitha ketshezi ngayinye.
Phakathi abangochwepheshe emkhakheni yamakhemikhali ethandwa 1-3 intshi amadivayisi umthamo 1040 amalitha ngomzuzu. Amadivayisi kuhluke ukusebenza kakhulu futhi izindleko eyamukelekayo.
Diaphragm cleaner futha esebenza kahle, izinketho zokufinyelela, ukuthembeka kanye nobungane kwemvelo. ngempumelelo enkulu ibangelwa idivayisi design, ukunika amandla ukunikeza ukugeleza enkulu ketshezi ne ubuncane emoyeni ukusetshenziswa futhi okusizwa ukushaya.
Ukuba khona ngalendoda indawo eziningi futhi isibalo ukuqala kanye Imiphumela kuhlangene ezihlukahlukene ongakhetha kukuvumela ukusebenzisa idivayisi emikhakheni ehlukahlukene. Trouble khulula operation okuthembekile kuyo yonke impilo ye oilless kuqinisekisa ukuthi eziyisisekelo noma umehluko umshayeli valve. ukwakhiwa aboshelwe evumela esiphezulu chemical ukuzinza kanye ukuvimbela ukuvuza.
iyunithi Modular, inombolo ukuncipha izingxenye zesakhiwo kanye lula ukusetshenziswa ukukhanda kits ukunciphisa izindleko kanye isikhathi ukulungisa. Ukuba khona main emoyeni umphini stop ukuthi luvimbele idivayisi ngisho ongaphakeme ngaphandle umfutho womoya.
Ishalofu imifanekiso, engela ongcwele emkhayeni wamaKristu
Indlela ukususa izintonga ibhayisikili ngaphandle Puller - amacebiso awusizo
Indlela ukubhaka Pike perch kuhhavini